ISAHLUKO 2: IINKCUKACHA ZOMFANEKISO WAMA-6565 -Geofumadas
ISAHLUKO 2: IZINTO ZENKQUBO YEZ6565
NgoJanuwari, 2011 intloko
Inkqubo yenkqubo, njengoko injalo emva kofakelo, inezinto zilandelayo, ezidweliswe ukusuka phezulu kuye ezantsi: Imenyu yesicelo, ibar yesixhobo sokufikelela ngokukhawuleza, iribhoni, indawo yokuzoba, iwonga kunye nezinye izinto ezongezelelekileyo, ezinje ngebhari yokuhambisa indawo yokudweba kunye nefestile yomyalelo. Inye nganye, ngokulandelelana kwayo, inezinto zayo nezinto zayo ezizodwa.
Abo basebenzisa i-Microsoft Office 2007 okanye iphakheji ye-2010 bayazi ukuba lo mboniso ufana neenkqubo ezifana neSizwi, i-Excel kunye ne-Access. Enyanisweni, AutoCAD ujongano iphefumlelwe iRibhoni ka-Microsoft kunye efanayo iyasebenza izinto ezifana menu isicelo kunye tabs ezisahlula uze ucwangcise imiyalelo.
Masibone nganye yezinto ezenza i-Autocad isikhombiso ngokucophelela.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ividiyo ye vavanyo ye6565
Post Next Iprojekthi yeProjekthi nge-AutoCAD Civil 3D 2011Okulandelayo »